ခြံအမှတ် (၅၄)၊ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း - ဝီကီပီးဒီးယား
ခြံအမှတ် (၅၄)၊ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းသည် ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့တွင် တည်ရှိသော အိမ်တစ်လုံးဖြစ်သည်။ ထိုနေအိမ်တွင် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်) နေထိုင်သည်။ အဆိုပါနေအိမ်သည် တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း အင်းလျားကန်အနီးတွင် တည်ရှိသည်။
မြန်မာ: ၅၄၊ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း
၂၀၁၂ ခုနှစ်က ထိုနေအိမ်၏ မြောက်ဘက်မြက်ခင်းပြင်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ
ခြံအမှတ် (၅၄)၊ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့
ကိုဩဒိနိတ်: 16°49′32.88″N 96°9′1.8″E﻿ / ﻿16.8258000°N 96.150500°E﻿ / 16.8258000; 96.150500
၂ နိုင်ငံရေးအရ အရေးပါမှု
၃ ပိုင်ဆိုင်မှုအတွက် တရားစွဲဆိုခြင်း
၄ ရုပ်ရှင်တွင် ပါဝင်ခဲ့မှု
အမေရိကန်သမ္မတ ဘာရက် အိုဘားမား သူမ၏နေအိမ်သို့ လာရောက်သည်ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ ကြိုဆိုနေပုံ (ဘယ်)နှင့် ဗြိတိန် နိုင်ငံခြားရေးရာ အတွင်းရေးမှူး William Hague (ယာ) ခြံအမှတ် (၅၄)၊ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းသို့ လာခဲ့စဉ်
၁၉၅၃ ခုနှစ်တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အကိုလတ်ဖြစ်သူ ကိုအောင်ဆန်းလင်းသေဆုံးသွားသောအခါ သူမနှင့် သူမ၏ မိခင် ဒေါ်ခင်ကြည်၊ အကိုကြီးဖြစ်သူ ဦးအောင်ဆန်းဦးတို့သည် ကန်တော်ကြီးအနီး တာဝါလမ်း(ယ္ခု ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပြတိုက်လမ်း)တွင်ရှိသော ၎င်းတို့၏နေအိမ်မှ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းရှိ အင်းလျားကန်ကိုမျက်နှာမှု၍ ဆောက်လုပ်ထားသော ကိုလိုနီခေတ်လက်ရာ နေအိမ်သို့ ပြောင်းရွေ့ခဲ့ကြသည်။
ထမင်းစားခန်းတွင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနေပုံ (Clicking onaperson will take you to their article.)
အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဟီလာရီ ကလင်တန်နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အိမ်အရှေ့ဘက် မြက်ခင်းပြင်တွင် တွေ့ဆုံနေပုံ (၂၀၁၁ ခုနှစ်)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ရှစ်လေးလုံး အရေးအခင်းအတွင်းတွင် နိုင်ငံရေး၊ ဘာသာရေး အစရှိသဖြင့် နယ်ပယ်အသီးသီးတို့မှ လူများနှင့် ထိုနေအိမ်တွင်ပင်တွေဆုံခဲ့သည်။ သူမသည် ၁၉၈၈ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၀ ခုနှစ်အထိ ၂၁ နှစ်တွင် ၁၅ နှစ်နီးပါး ထိုနေအိမ်ထဲတွင် နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ဘဝဖြင့် နေထိုင်ခဲ့ရသည်။
ရွှေဝါရောင်အရေးအခင်းအတွင်းတွင် သံဃာတော်များ၏ ချီးမြှောက်မှုကို ခံယူရန်၂၀၀၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၂၂ ရက်နေ့ နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ဘဝဖြင့် ရှိနေစဉ်တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ခြံတံခါးဝ၌ ခဏတာမျှ လူထုရှေ့သို့ ထွက်လာခဲ့သေးသည်။
၂ ရက် မေလ ၂၀၀၈ ခုနှစ် နာဂစ်မုန်တိုင်း တိုက်ခတ်အပြီးတွင် အိမ်ခေါင်းမိုး ပျက်စီးခဲ့ပြီး မီးများပြတ်တောက်ကာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် အမှောင်ထဲ၌ နေခဲ့ရသည်။ သူမသည် ညအခါ၌ အလင်းရောင်အလို့ငှာ ဖယောင်းတိုင်များ အသုံးပြုခဲ့ရသည်။ အိမ်အား ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဩဂုတ်လတွင် ပြန်လည်ပြုပြင်ပေးခဲ့သည်။
၄ ရက် မေလ ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်နိုင်ငံသား ဂျွန်ရက်တော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အိမ်သို့ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်မှုသည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ၂၇ မေလ နေအိမ်အကျယ်ချုပ်မှ လွတ်ရန် ၂ ပတ်အလိုတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ဒါဟာ မြန်မာနိုင်ငံ ဥပဒေအရ ဧည့်သည်သည် ဧည့်စာရင်းတိုင်ကြားခြင်းမရှိပါပဲ တညလုံးနေထိုင်မှုသည် ပြစ်မှုမြောက်သည်။ ထိုတရားမဝင် ကျူးကျော်ဝင်ရောက်မှုဖြင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် နောက်ထပ် ၁၈ လမှ အထိန်းသိမ်းခံရန် အမိန့်ကျခဲ့သည်။ ထိုအကျိုးဆက်ကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ၂၀၁၀ ရွေးကောတ်ပွဲတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်း မပြုနိုင်ခဲ့ချေ။
၁၃ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် သူမသည် သူမအား ထောက်ခံသူများအား သူမအိမ် ခြံတံခါးဝမှ ဝှေ့ယမ်းနှုတ်ဆက်ခဲ့ရာ သူမ၏ ခြံတံခါးဝတွင် သူမကိုထောက်ခံသူ လူအုပ်ကြီးဖြင့် ပြည့်နှက်ခဲ့ရာ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များဖြင့် ရှင်းလင်းပေးခဲ့ရပြီး သူမ နေအိမ်အကျယ်ချုပ်မှ လွတ်မြောက်ခြင်းအား ပျော်ရွှင်စွာ ကျင်းပခဲ့ကြသည်။
၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်တွင် ဦးအောင်ဆန်းဦးသည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား အိမ်၏အမွေတစ်ဝက် ရပိုင်ခွင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်သို့ ဦးတိုက်လျှောက်ထားခဲ့သည်။ ဒီအဖြစ်အပျက်ဟာ နိုင်ငံရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာသူ အများအပြားထံပျံနှံ့ခဲ့ပြီး ဦးအောင်ဆန်းဦးသည် ထိုအိမ်တဝက်ကို ထိုစဉ်ကအုပ်ချုပ်သူ နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီမှ စစ်ဘက်ခေါင်းဆောင်များအား ရောင်းချလိမ့်မည်ဟု မှန်းဆခဲ့ကြသည်။ သို့ပေမယ့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်သည် ထိုအမှုတွင် ဦးအောင်ဆန်းဦးအား ရှုံးနိမ့်စေကာ နိုင်ငံရေးလေ့လာသူအများအပြား အံ့အားသင့်ခဲ့ရသည်။ ထိုစဉ်က အုပ်ချုပ်သူအစိုးရသည် တရားစီရင်ရေးတွင် များစွာလွှမ်းမိုးမှုရှိသောကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရှုံးလိမ့်မည်ဟု ယူဆခဲ့ကြသည်။ ပြည်ပရောက်မြန်မာများနှင့် ရန်ကုန်မြို့ရှိ လေ့လာစောင့်ကြည့်သူများအဆိုအရ တိုင်းမ် မဂ္ဂဇင်းမှ အစီရင်ခံစာတွင် စစ်အစိုးရမှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ် အာဃာတဖြင့် ထိုတရားစွဲဆိုမှုကို ခွင့်ပြုခဲ့သည်ဟု ဆိုကြသည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် Luc Besson ရိုက်ကူးသော The Lady ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွင် ဤနေအိမ်ပါဝင်ခဲ့လေသည်။ ဒါရိုက်တာ Luc Besson ၏ အုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့အောက်တွင် သူ၏ အဖွဲ့သားများသည် အတိကျဆုံးဖြစ်အောင် ကြိုးစားခဲ့ကြပါသည်။ အိမ်အားပြန်လည်တည်ဆောက်စဉ်တွင် အရပ်လေးမျက်နှာမှစ ထပ်တူဖြစ်အောင် တည်ဆောက်ခဲ့သောကြောင့် ကြည့်ရှုသူပရိသတ်သည် နေထွက်သည်မှစ ထပ်တူခံစားခဲ့ရသည်။ ထိုရုပ်ရှင်ထဲမှ နေအိမ်အား ဂြိုဟ်တုများမှ ရရှိသော ဓာတ်ပုံများနှင့် မိသားစုဓာတ်ပုံ ၂၀၀ ခန့်ကို အခြေပြုပြီး တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ရာ ၁:၁ အတိုင်း အတိကျဆုံးဆောက်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။
↑ Wintle, Justin (2007). Perfect Hostage. Skyhorse Publishing, 9781602392663။
↑ Democracy icon Aung San Suu Kyi greets Myanmar monks.
↑ "Official: UN plane lands in Myanmar with aid after cyclone"၊5May 2008။ 1 December 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Lawyer: Myanmar possibly rushing Suu Kyi's trial"၊ Associated Press၊ 19 May 2009။ 19 May 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 20 May 2009။
↑ Mydans၊ Seth။ "Myanmar Presses Case Against Pro-Democracy Leader"၊ 19 May 2009။
↑ Sudekum Fisher, Maria (14 May 2009), "Motives of American who swam to Suu Kyiamystery", Associated Press
↑ Zaw, Aung (13 May 2009), "Suu Kyi's Stalker Swimmer", Irrawaddy
↑ Aung San Suu Kyi's house gate auctioned for $200,000။ BBC News။
↑ ၉.၀ ၉.၁ TIME magazine, "Burmese Democracy Leader Faces New Threat", November 28, 2000 quote: "Talk about spite.
↑ NCGUB quote: "If he wins the case, U Aung San Oo is expected to turn his share of the house over to the government,aresult which would put Daw Aung San Suu Kyi in an extremely precarious position."
↑ Adams၊ Cindy။ "The lady isachamp in Burma"၊ New York Post၊ 15 December 2011။ 20 December 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "The Lady: Aung San Suu Kyi's Fight for Freedom"၊ Time၊ 27 December 2010။ 20 December 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ခြံအမှတ်_(၅၄)၊_တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း&oldid=407019" မှ ရယူရန်
၁၇ ဇွန် ၂၀၁၈၊ ၀၉:၀၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၇ ဇွန် ၂၀၁၈၊ ၀၉:၀၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။